Tenga Induction Inonyungudutsa Copper Furnace Mugadziri, Inonyungudutsa Brass choto
musha / Induction Inoyunguta Moto / Kufuridza Mhangura Yesirivha / Kunyausa Mhangura Yemoto neInduction
Categories: Kufuridza Mhangura Yesirivha, Igbt tilting induction yakanyungudusa chira, Induction Inoyunguta Moto, Metal Melting Furnace Tags: ndarira inopisa rvira, induction furnace, induction melting, kudonhedzwa kunyorera vira, kusungunuka mhangura, kunyauka mukati mevira, kunyungudha mhangura induction furnace, zvimiso zvinoputika muvira
High Quality Medium Frequency Induction Inoyungudutsa Mhangura Yakavhenekera Kutsvaira Mhangura, Indarira, Sirivha, Sirivha, Ndarama neAluminium, nezvimwewo.
Nguva yakawanda inokonzerwa nehuwandu hwekunyunguduka Inopisa zvipfeko zvinonyanya kushandiswa kugadzika kwesimbi, simbi isina zvimbi-sina, mhangura, ndarira, sirivha, ndarama, uye aluminium zvinhu, nezvimwe .Melting simba rinogona kubva ku3KG kusvika ku500KG.
Simba reMF Induction rinosvibisa mhepo yeCopper:
Mushonga unoiswa unosanganisira midhijhini generator, kubhadhara capacitor uye kuvira kwevira, infrared kutora sensor uye kutarisa magetsi zvinogonawo kubatanidzwa kana akarayirwa. Mhando mitatu yehuni inoputika inogona kuiswa maererano nenzira yekudururira, Iyo iri kushandura tanini, inopisa-tanidza nevira rinopisa. Maererano netsika yekugadzirisa, kuvira kwevira kunoparadzaniswa kuva marudzi matatu: gwaro rinopisa moto, magetsi anopisa moto uye magetsi anokonzera moto.
Zvinhu zvakanyanya zveMF Induction Mitambo yakasanganiswa yemafuta:
MF kushandiswa kwemashini inogona kushandiswa mukunyunguduka kwesimbi, simbi isina tsvina, ndarira, aluminium, ndarama, sirivha nezvimwewo.
nekuda kwemagumisiro anokonzera anokonzerwa nemagetsi, simba rekunyunguduka rinogona kukurudzirwa munguva yekunyunguduka kunobatsira kutenderera kwemafuro nemafuta kuti zvive nehupamhi hwekukanda zvikamu.
Wide frequency range kubva ku1KHZ kusvika ku20KHZ, kushanda kwenguva yakawanda kunogona kugadzirwa nekushandura coil nekubhadhara capacitor maererano nekunyunguduka kwezvinhu, huwandu, kukurudzira chido, kubata ruzha, kunyanya kushanda uye zvimwe zvinhu.
Simba rinobudirira ndiro 20% rakakwirira kupfuura ma SCR medium frequency machines;
Zviduku uye zvishoma, mhando dzakawanda dzinogona kushandiswa kuti dzisvike zvakasiyana-siyana zvematare. Kwete chete yakakodzera firiti, asiwo yakakodzera kukoroji uye kutsvakurudza makambani ekushandisa.
Maitiro makuru uye kuvhiringidza mano:
Itafura iri pasi apa inonyora zvinonyanya kuratidza uye yakakurudzirwa zvakanyunguduka kusunguka maitiro. Panenge 50 kusvika kumaminitsi e60 anodiwa kuti apedze kunyorera kumwe kune imwe nzvimbo inotonhorera yevira, pamamiriro ekutsva kwechoto, chete 20 kusvika maminitsi 30 anodiwa.
Zvikamu zvakanyanya zvemukoko inotengesa inoputika yehuni yesimbi system:
2. Kusungira Vira.